वामदेव गौतम नेकपामा कसरी भए शक्तिशाली ? « Postpati – News For All
वामदेव गौतम नेकपामा कसरी भए शक्तिशाली ?
भदौ १, काठमाडौं । नेकपाभित्र वामदेव गौतम फेरि शक्तिशाली भएका छन्। यो खबर रामकृष्ण अधिकारीले अन्नपूर्ण पोष्टमा लेखेका छन् ।
१ भाद्र २०७६, आईतवार को दिन प्रकाशित